ခရီးထွက် ကားစီးတိုင်း လူမမာတစ်ယောက်လို့ ဖြစ်သွားရလောက်အောင် မူးတက်၊ အန်တက်တဲ့ လူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..
June 17, 2019 Thuta Star 0
ကားစီးရင် ကားမူးတတ်တဲ့ သူတွေ ဒီနည်းလေးကို သုံးကြည့်။ ကားမြင်တာနဲ့ မစီးရသေးဘူး မူးတတ်တဲ့ကိုယ်။ မူးရလွန်းလို့ ခရီးဆုံးရောက်ရင် လူမမာလို ဖြစ်တတ်တဲ့ ကိုယ်။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့မှ အဆင်ပြေတော့တယ်။ ဆေးပေါင်းစုံ သောက်ဖူးတယ်။ ဂျင်းတွေ ဝါးဖူးတယ်။ ချက်တွေလဲ ပလာစတာကပ်ဖူးတယ်။ နည်းပေါင်းစုံလုပ်ဖူးတယ်။ တစ်ခုမှ မထိရောက်ခဲ့ဘူး။ သွေးခုန်နှုန်း […]
အရမ်းကို ဆုတောင်းပြည့်လွန်းလို့ မင်းညီ မင်းသားတွေ မဖူးရဟု အမိန့်ထုတ်ထားရတဲ့ရုပ်ပွားတော်မြတ် အေကြာင်း…
အရမ်းကို ဆုတောင်းပြည့်လွန်းလို့ မင်းညီ မင်းသားတွေ မဖူးရဟု အမိန့်ထုတ်ထားရတဲ့ရုပ်ပွားတော်မြတ် အကြောင်း… စစ်ကိုင်းတောင် တစ်ဖက်ကမ်းကရွှေကြက်ယက် ရွှေကြက်ကျဘုရားတွေဖြစ်ပြီး ဒီဆုတောင်းပြည့်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့ ရွှေကြက်ယက်စေတီအတွင်းမှာ ရှိပါတယ် ။ အနော်ရထာမင်းကြီးလက်ထက်မှာ တစ်ကြိမ်…၊ နရပတိစည်သူမင်းကြီးလက်ထက်မှာ တစ်ကြိမ်… မည်သည့်မင်းညီမင်းသားမှ မဖူးရလို့အမိန့်တော်ထုတ်ပြန်ပြီး အစာင့်တွေချထားကာ သော့ခတ်ထားခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ရှေ့ကို တနေ့ကရောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားကိုဖူးတွေ့လိုက်တာနဲ့ […]
လှူပါ.. မျှော်ကိုးပြီးမလှူပါနဲ့… ဝေဖန်အပြစ်တင်ဖို့ မလှူပါနဲ့… ပီတိအတွက် လှူပါ..
လှူပါ.. မျှော်ကိုးပြီးမလှူပါနဲ့ ဝေဖန်အပြစ်တင်ဖို့ မလှူပါနဲ့ ပီတိအတွက် လှူပါ ကိုယ်လဲဘယ်လောက်လှူနိုင်မှာမို့လဲ စားတဲ့သူရော ဘယ်လောက်စားနိုင်မှာမို့လဲ ကံပါမှ စားခွင့်ရတာပါ ဒီငွေပမာဏဟာ သင်ဆင်းရဲသွားမှာမဟုတ်သလိုယူတဲ့သူအတွက်လဲ ကြီးပွားမသွားပါဘူး ..peace ✌️ (မန်းမြို့ နန်းရှေ့သူတယောက်ရဲ့ ရင်တွင်းဖြစ်စကား) ကိုယ်ရဲ့အပျော်တွေထည့်လို့မဆန့်အောင်ပိုလျှံလို့ ဝေခဲ့ရသေးတယ် အလှူတန်းချမ်းသာကြွယ်ဝ လက်မနှေးတတ်တဲ့မန်းသူမန်းသားတွေအတွက် ဒါတွေဟာအသေးအမွှားအလှူလေးပါ အခြားအလှူရှင်တွေလဲဒီထက်မက […]
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးလှတဲ့ ဖနွမ်းပင်အမှိုက်ပုံကြီးမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ အခုလိုရင် ပညာသင်ဆုအပြည့်နဲ့ သြစတေးလျနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်မှာ ဆက်လက်ပညာသင်ကြားခွင့်ရနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမနာမည်ကတော့ ဆိုဖီဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုဖီဟာ Cambodian Chidren’s Fund (CCF)ရဲ့ ထောက်ပံ့မှုနဲ့ မဲလ်ဘုန်းတက္ကသိုလ်မှာ ဒီဂရီဘွဲ့အတွက် ပညာတော်သင်ဆု ရရှိခဲ့တာပါ။ ဆိုဖီဟာ […]
ရဲတပ်ဖွဲ့ မှနာရီပိုင်းအတွင်း ဖော်ထုတ်လိုက်သော စိတ်မကောင်းစရာ ချစ်သူစုံတွဲလေးရဲ့ ဖြစ်ရပ်..
ရဲတပ်ဖွဲ့ မှနာရီပိုင်းအတွင်း ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ စိတ်မကောင်းစရာ ချစ်သူစုံတွဲလေးရဲ့ ဖြစ်ရပ် မှော်ဘီမြို့နယ် ဆပ်သွားတောအုပ်စု ရဲဘော်ဈေးပန်ခြံတွင် (17/6/2019)နံက်ဦးပိုင်း (4:30)နာရီ အချိန်ခန့်တွင် မောင်——– သည် ခရမ်းမှချစ်သူရှိရာ ရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိလာပြီး မှော်ဘီမြို့နယ်ဆပ်သွားတောအုပ်စု ရဲဘော်ဈေးပန်းခြံတွင် မ———နှင့် ချစ်သူနှစ်ဦးစကားပြောနေစဉ်၊ အမည်မသိအမျိုးသားနှစ်ဦးမှ သူမ၏ ချစ်သူဖြစ်သူအား ဒုတ်ဖြင့်ရိုက်ပြီး၊ နောက်တစ်ဦးမှာ […]
အရမ်းချစ်မိသွားတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ဒါလေးတွေ လုပ်တတ်တယ် …
အရမ်းချစ်မိသွားတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ဒါလေးတွေ လုပ်တတ်တယ် … အရမ်းကို ချစ်မိသွားတဲ့ မိန်းကလေး တယောက်ဟာ သူငယ်ချင်းတွေ ဘယ်လောက်ပဲ နားချချ နားမ၀င် နိုင်တော့ဘူး…။ အရမ်းကို ချစ်မိသွားတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူကို မကောင်းဘူး ပြောလည်း မသိချင်ယောင် ဆောင်နိုင်သွားတယ်…။ အရမ်းကို […]
အချစ်စစ်နဲ့ပဲ သန့်သန့်လေးချစ်တတ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့အပြုအမူများ..
အခုလိုခေတ်မျိုးမှာ အချစ်စစ်ဆိုတာ အရမ်းရှားသွားပါပြီ။ တဏှာကိစ္စတွေမပါဘဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အပေါ်ကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးချစ်တတ်တဲ့ယောကျာ်းတွေရှားသွားပြီလို့ ပြောရင်လည်း မလွန်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မရှိဘူးလို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဲလိုဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေမှာ ဒီလိုအပြုအမူတွေရှိပါတယ်။ ၁။ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရင် အတွဲခုံမှာ မထိုင်တတ်ဘူး စုံတွဲခုံမှာထိုင်တိုင်း တဏှာစိတ်ပါနေကြတယ်လို့တော့ မဆိုလိုပါဘူး။ တဏှာစိတ်မရှိတဲ့ ယောက်ျားလေးတော်တော်များများ ရိုးသားတတ်ကြတယ်။ အဲ့လိုရိုးသားတဲ့အတွက် […]
ကမ္ဘာကျော်တော့မယ့် မြန်မာပြည်က FOOD BOX ….
ကမ္ဘာကျော်တော့မယ့် မြန်မာပြည်က FOOD BOX ဆဲချင်တဲ့သူက ထိုင်ဆဲမယ်။ အပြစ်ပြောချင်သူကလည်း ထိုင်ကြည့်ပြောနေမယ်။ ဝေဖန်သူကလည်း နေရာကို ရောက်ရဲ့လားတောင်မသိ ဝေဖန်ကြမယ်။ ဒါက တစ်ပိုင်း။ Food box တဲ့..လတ်တလော အနေအထားအရ အောင်မြင်တယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ လာလှူတဲ့ သူတွေကလည်း နာရီ အပိုင်းအခြား တစ်နာရီအတွင်း […]
Winner ဆုနဲ့ လွဲချော်ခဲ့ပေမယ့် ကြက်သီးမွှေးညှင်းတွေထစေတဲ့အထိ ဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့ Hazel ….
ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ The Voice Myanmar Season (2) ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ Final Show ကြီးကတော့ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Top (4) လေးယောက်ဖြစ်တဲ့ Hazel, Novem Htoo, Paul Austin နဲ့ Melody […]
အကယ်ဒမီ ‘ဒွေး’ ပြောခဲ့တဲ့ ပုံပြင်ကို အခုထိ မမေ့သေးတဲ့ ဦးထွန်းလွင် ပညာရှင်အစစ် တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့တာ၊ ၁၆-၆-၂၀၁၉၊ ည(၁၁းဝ၄)နာရီ။ ပညာရှင်၊ မောင်ထွန်း လွင် (မိုးလေဝသ) အကယ်ဒမီ “ဒွေး” ပြောတဲ့ “ပညာရှင်ဆိုတာ”၊ ကျွန်တော် ၂၀၀၉ […]